Remeron - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Remeron
Generic Name: Remeron Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Remeron ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Remeron® (mirtazapine) ကို စိတ်ကျရောဂါများတွင် အများဆုံးအသုံးပြုကြပါသည်။ Remeron® ကို ဤစာရင်းတွင်မပါသော အခြေအနေများတွင်လည်း အသုံးပြုကောင်း ပြုနိုင်ပါသည်။
Remeron® ကို အိပ်ယာမဝင်ခင် တစ်ရက်တစ်ကြိမ် သောက်ရပါသည်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း လိုက်နာပါ။ Remeron® ပုံမှန်ဆေးပြားကို ရေနှင့်သောက်နိုင်သည်။ လက္ခဏာများသက်သာရန် ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ ကြာတတ်၏။ ညွန်ထားသည့်အတိုင်း ဆေးကိုဆက်သောက်နေပါ။ ၄ ပတ်ကျော်လိုမှ သက်သာမလာလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
Remeron® ကို ရုတ်တရတ်ဖြတ်လိုက်ခြင်းမျိုး မလုပ်ရပါ။ မအီမသာခံစားရမည့် ဆေးဖြတ်လက္ခဏာများ ခံစားရနိုင်ပါသည်။ mirtazapine ကိုစိတ်ချစွာ ဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်ကိုမေးပါ။
Remeron® (mirtazapine) ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းမှုများ မဖြစ်စေရန် Remeron® (mirtazapine) ကို ရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Remeron® (mirtazapine) ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ ကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသောပုံစံ ကွဲပြားခြားနားမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းခြင်းကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင် ထားပါ။
Remeron® (mirtazapine) အားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအား မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Remeron အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Remeron®တွင်ပါသော active agent များ inactive agent များနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိလျှင်။
ပြီးခဲ့သည့် ၁၄ ရက်အတွင်း၌ MAO inhibitor များ သုံးထားပါက Remeron® ကို မသုံးရပါ။ MAO inhibitor များတွင် isocarboxazid, linezolid, methylene blue injection, phenelzine, rasagiline, selegiline, tranylcypromine စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
စိတ်ကျရောဂါကုဆေးများကို စသောက်ခါစ၌ လူငယ်များတွင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေလိုစိတ်များ ပေါ်လာတတ်၏။ Remeron® သုံးနေစဉ် ဆရာဝန်ဆီမှန်မှန်ပြခြင်းအားဖြင့် သင့်အခြေအနေတိုးတက်မှုကို ဆရာဝန်မှ စစ်ဆေးပေးပါလိမ့်မည်။ သင့်မိသားစုဝင်များ၊ သင့်ကိုပြုစုသူများကိုလည်း သင့်စိတ်အခြေအနေ ပြောင်းနိုင်ကြောင်း လက္ခဏာများပေါ်နိုင်ကြောင်း အသိပေးထားပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Remeron ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များ မရှိပါ။ ဆေးမသုံးစွဲမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် သတ်မှတ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Remeron ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဤဆေးကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ –
Creatine Kinase များ များလာခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Remeron နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Remeron® (mirtazapine) သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်စေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကို စာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်လျှင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်း စသည်တို့ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Remeron နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Remeron® (mirtazapine) က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Remeron နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Remeron® (mirtazapine) သည် လက်ရှိသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
Remeron® ကိုစိတ်ချစွာသုံးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါတို့ရှိပါက ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
အသည်း သို့ ကျောက်ကပ်ရောဂါ
ကိုလက်စ်ထရော၊ ထရွိုင်ဂလစ်စရိုက်များ များခြင်း
ဆေးစွဲဖူးခြင်း၊ သတ်သေလိုသည့်အတွေးများ တွေးဖူးခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Remeron ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သတ်မှတ်ထားသောပမာဏမှာ တစ်ရက်လျှင် 15-45 mg ဖြစ်သည်။
တုံ့ပြန်မှုမှာ မလုံလောက်လျှင် အမြင့်ဆုံးပမာဏအထိ တိုးပါ။ လုံလောက်သောပမာဏဖြစ်ပါက ရလဒ်များကို ၂-၄ ပတ်အတွင်း ပြပါလိမ့်မည်။ ထိုထက်ပိုကြာသည်အထိမပြပါက ဆေးကိုရပ်သင့်ပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Remeron ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Remeron® (mirtazapine) ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Remeron® ဆေးပြား 30 mg
Remeron® (mirtazapine) ကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါက လွတ်သွားသောအကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုး မလုပ်ပါနှင့်။
Remeron®. http://www.mims.com/philippines/drug/info/Remeron%20soltab. Accessed Mar 4, 2017
Remeron®. https://www.drugs.com/Remeron.html. Accessed Mar 4, 2017.
စိတ်ကျရောဂါတွေကို လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ တိုက်ထုတ်စို့
က််န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား A-Z, ကျန်းမာရေးစင်တာ
က််န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား A-Z, ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ, ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, စိတ်ကျန်းမာရေး
စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့ သူငယ်ချင်းကို အားပေးတော့မယ်ဆိုရင်
အမျိုးသားများ စိတ်ရောဂါကြောင့် အသက်သေဆုံးနိုင်ခြေပိုများ